I-Apple ivula iakhawunti ye-twitter ngeSpanish kwiVenkile yeApple @AppStoreES | IPhone iindaba
I-Apple ivula iakhawunti ye-twitter ngeSpanish kwiVenkile yeApple @AppStoreES
U-Apple usandula ukuvula iakhawunti entsha kwi-Twitter, kwaye sele zikhona ezimbalwa, apho inika inkxaso ngeSpanish kubo bonke abasebenzisi abanamathandabuzo okanye imibuzo malunga neVenkile ye App kunye nokusebenza kwayo. Ukuza kuthi ga ngoku u-Apple wayesele enze iakhawunti yeVenkile ye App ngesiNgesi, lolona lwimi luphambili eMelika, kodwa nase-Australia, Canada, Ireland nase-United Kingdom nakwamanye amazwe apho isiNgesi lulwimi lwesibini olusemthethweni. Le akhawunti intsha yile @AppStoreES
Iiapps ze-iPhone, i-iPad, iApple TV, iApple Watch kunye neMac ezo ❤️. Yonke imihla.https://t.co/zAcC6ZfUqF
Ivenkile yeeVenkile ngeSpanish (@AppStoreES) Julayi 28, 2016
Kodwa iSpanish, ulwimi lwesithathu oluthethwa kakhulu emhlabeni, emva kweTshayina kunye neHindustani (iseti yolwimi oluthethwayo eIndiya nakwinxalenye yeAsia) nangaphambi kwesiNgesi, abakwazanga ukuyibeka ecaleni, ngakumbi ngoku ekubeni inkampani esekwe eCupertino inezicwangciso zokuqala ukwanda eLatin America. IMexico iya kuba lilizwe lokuqala kwiLatin America ukuvula iVenkile yokuqala yeApp kule ndawo kungekudala. Amazwe alandelayo athi ngokwezicwangciso zika-Apple ayakuba ngala alandelayo iya kuba yiArgentina, iChile nePeru.
Ivenkile yeApple iyafumaneka kumazwe amaninzi emhlabeni, kodwa isiNgesi asithethwa kuwo onke amazwe. Inkampani iyayazi loo nto ube nakho ukwandisa urhwebo lwezicelo zakho kwamanye amazwe Apho isiNgesi singathethwayo kunyanzelekile ukuba kulungiselelwe indlela kunye nokwenza iakhawunti ye-Twitter apho abasebenzisi baya kuba nakho ukusombulula amathandabuzo abo yeyona nto ifanelekileyo.
Molo! Wamkelekile kwisitishi esisemthethweni seVenkile yeApp, ngeSpanish ngokupheleleyo! pic.twitter.com/a5Bs048OHl
Bonke abalandeli bale akhawunti ye-Twitter, abathi ngexesha lokubhalwa kweli nqaku bakufutshane nama-7.000, baya kuba nakho Hlala unolwazi ngalo lonke ixesha leendaba malunga nezicelo Ukufika okanye ukuhlaziywa kwi-iOS, i-watchOS, i-tvOS kunye ne-macOS. Kodwa akuyi kubakho kunqongophala kwee-monographs ezisekwe kwinkampani esekwe eCupertino elungiselela ukubhiyozela umsitho obalulekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple ivula iakhawunti ye-twitter ngeSpanish kwiVenkile yeApple @AppStoreES
Uxolo, kodwa yintoni enomdla kum kukuba iApple inevenkile yeApple ecwangcisiweyo eArgentina? Ngaba isemthethweni okanye amarhe? Ndiyabulela kakhulu
Okwangoku akukho nto iqinisekisiweyo, kodwa ukusukela ekuqaleni konyaka ndifundile kumanqaku aliqela ukuba iArgentina, iChile nePeru zingangamazwe alandelayo. Ukongeza, lixesha lokuba kugxilwe kwiLatin America.
Enkosi uIgnacio ngokuphendula. Ukubulisa
Pegatron iqalisa ukusebenzisa iirobhothi kumaziko ayo
Iimfihlakalo zeBrighstone: Ihotele eParanormal yasimahla kwiXesha elilinganiselweyo